Eoropa Andrefana · Avrily, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Avrily, 2011
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Avrily, 2011
Mpanoratra Sy Mpandika Teny Asongadina: Asteris Masouras
Gresy 28 Avrily 2011
Anatin'ity tafatafa niarahana tamin'ny mpandray anjara amin'ny Global Voices ity, miresaka ny amin'ny fomba nanombohany nanoratra ho an'ny vohikala i lay mpanoratra sady mpandika teny, Asteris Masouras. Monina any Thessaloniki, Gresy, Asteris dia nanoratra ho an'ny Global Voices hatramin'ny 2008, mikasika an'i Gresy fireneny sy lohahevitra maro hafa eran'izao tontolo izao. Fanampin'izay, izy dia isan'ireo mpandika teny fototra ho an'ny vohikalantsika niforona tsy ela akory izay, Global Voices amin'ny fiteny Grika.
Azia Atsimo 17 Avrily 2011
Ny fandraràna napetraka tsy ela akory izay tao Frantsa momba ny burqa (niqab), voaly mandrakotra ny tava fitondran'ny Silamo, dia niteraka resabe teny anivon'ny tontolon'ny fitorahana bilaogy manerana izao tontolo izao. Tsy manondro mivantana na inona na inona mikasika ny burqa ilay lalàna ary antsoina hoe “lalàna mandràra ny fandrakofana ny tava eny amin'ny toerana iraisam-bahoaka”. Saingy ny fampiharana azy dia miantraika amin'ireo Silamo. Niresaka momba izay olana izay ny maro tamin'ireo mpitoraka bilaogy Aziatika Tatsimo.